Mpikatroka mpiaro zon'olombelona malaza maty tany amin'ny fonjan'i Kyrgyzstan
Home » Vaovao momba ny zon'olombelona » Mpikatroka mpiaro zon'olombelona malaza maty tany amin'ny fonjan'i Kyrgyzstan
Ny mpikatroka zon'olombelona Azimjam Askarov dia maty nandritra ny fotoana nitazomana azy tany Kyrgyzstan, na teo aza ny fanapahana iraisam-pirenena maro nitaky ny famotsorana azy tsy misy hatak'andro. Efa nandany 10 taona an-tranomaizina i Askarov taorian'ny nisamborana azy tamim-pahadisoana, noho ny fiampangana azy noho ny resaka asany tamin'ny famonoana inspektera polisy raha mbola nanoratra momba ny herisetra tamin'ny taona 2010 i Askarov nandritra ny adim-poko tany Kyrgyzstan. 69 taona i Askarov.
Maty i Askarov ny andro iray taorian'ny namindrana azy tany amin'ny tobim-pitsaboana fonja any Bishkek renivohitra Kyrgyzstan. Nandritra ny herinandro maro talohan'ny nahafatesany dia nisy hatrany ny fangatahana famindrana sy famotsorana azy noho ny fahasalamany izay niharatsy be sy ny fiakaran'ny vokatr'ilay tantara. Coronavirus.
"Mr. Azo sorohina ny fahafatesan'i Askarov, ”hoy izy HRF Mpikambana ara-dalàna iraisam-pirenena, Michelle Gulino. “Ny tsy fitoviana tafahoatra nasehon'ny manampahefana Kyrgyzstan tamin'ny tsy nanomezana azy fitsaboana ara-pitsaboana sahaza azy ary namotsorana azy tsy ho voatana am-ponja vonjimaika - na dia amin'ny androny farany aza - dia tandindon'ny karazana habibiana tsy voarindra izay nasehon'ny fitondrana manampahefana tao Kyrgyzstan amin'ireo izay manala sarona ny tsy rariny ataon'izy ireo. "
Tamin'ny herinandro talohan'ny nahafatesany dia narary tamin'ny soritr'aretina coronavirus i Askarov. Taty aoriana dia nitatitra ny antony nahafaty azy ny manampahefana noho ny pnemonia. Askarov dia nijaly tamin'ny aretina mitaiza maro ary atahorana ho tratran'ny virus, noho ireo sy ireo marefo hafa.
Tamin'ny 8 Jolay 2020, ny Human Rights Foundation (HRF) nametraka Antso maika noho ny fomba manokana natokana ho an'ny biraon'ny Firenena Mikambana momba ny zon'olombelona an'ny Komisiona avo, nangataka ny hanombohana fanadihadiana ara-potoana avy hatrany momba ny fisamborana diso an'i Askarov, ny fiampangana azy ary ny fitazonana azy am-ponja.
I Askarov dia niasa tamin'ny talen'ny Vozdukh ("Air"), fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Kyrgyzstan izay nifantoka tamin'ny asany amin'ny fitsaboana ireo voafonja sy fanatsarana ny fitanana am-ponja. Fantatra manokana izy tamin'ny famotopotorana azy ireo tranga fanitsakitsahana ny zon'olombelona ataon'ny mpikambana ao amin'ny departemantan'ny atitany ao amin'ny distrikan'i Bazar-Korgon.
Roza Otunbayeva, filohan'ny vonjimaikan'i Kyrgyzstan tamin'ny fotoana nanamelohana an'i Askarov tamin'ny 2010, dia nandà ny hamela famotsoran-keloka ho azy. Tamin'ny taona 2016, ny Komitin'ny Firenena Mikambana momba ny zon'olombelona dia nanaiky an'i Askarov ho iharan'ny fampijaliana, fitondrana ratsy ary fitsarana tsy ara-drariny nataon'ny State of Kyrgyzstan ary nangataka ny famotsorana azy haingana. Tamin'ny Mey 2020, nolavin'ny Fitsarana Tampony tao Kyrgyzstan ny fangatahan'i Askarov hijerena ny sazy an-tranony.
Taj Mahal: Aiza ny Fitiavana?
Abu Dhabi dia manao fanandramana matetika ny COVID-19 ho an'ny mpiasa fizahan-tany rehetra